टीकापुर बाट चिसापानी साथिहरु संग घुम्न गएका मदनको मोटरसाइकल दु’र्घटना नि’धन ! – Life Nepali
टीकापुर बाट चिसापानी साथिहरु संग घुम्न गएका मदनको मोटरसाइकल दु’र्घटना नि’धन !
टिकापुर २६ असोज। कैलालीको लम्की चिसापानी खण्डमा चिसापानी नजिकै ढुङ्गे बजारको पुलमा बा’इक दु’र्घट’ना कैलाली टीकापुरका मदन शाही दु’ख’द नि’धन भएको छ। ६ वटा बाइकमा सवार टो’लिमा चिसापानी घु’म्न आएको एउटा बाइक दु’र्घट’नामा परेको थियो। जिल्लाको लम्की चुहा नगरपालिका ३ चिसापानी नजिकैको ढु’ङ्गे बजारको पुलमा भएको मो’टरसा’इकल दु’र्घटनामा टीकापुर नगरपालिका १९ का २१ व’र्षीय मदन शा’हीको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
टीकापुर बाट चिसापानी जाँदै गरेको से ७प १४९६ नम्बरको मो’टरसाइ’कल अनियन्त्रित भएर दु’र्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दु’र्घटनामा ग’म्भीर घा’इते भएका शा’हीको लम्की स्थित लालरत्न अ’स्पतालमा उ’पचारका क्र’ममा मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दु’र्घटनामा मोटरसाइकल चालक अभिषेक सोडारि पनि ग’म्भीर घा’इते भएको प्रहरीले जनाएको छ । ला’लरत्न अ’स्पतालबाट उनलाई थप उपचारका लागि कोहलपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीले बताए । दु’र्घटना शनिवार दिउँसो करिब १ः३० बजे भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
थप समाचार – आज दशैँको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा, कात्तिक स्नान सुरु
बडादशैँ पर्व आइतबारदेखि समापन हुँदैछ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा आइतबार साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाआराधना गरी रातभर जाग्राम बसेर मनाएसँगै १५ दिन लामो दशैँ सकिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको दुर्गा पक्ष अर्थात् दशैँ पर्व कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन समापन गरिन्छ। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जाग्राम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन, ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएकोे धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले बताए।
माता दुर्गाका तीनवटा रुपमध्येका एक रुप महालक्ष्मीको पूजा गरेर आज दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजयादशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मीपूजाको १५ दिनअघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस पर्वको विशेष महत्व छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। आज राति जुवा खेल्ने विधानसमेत रहेको उनले बताए। महालक्ष्मीसँगै आज हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्छ। यस्तै सौभाग्य, सम्पत्ति, श्रेय प्राप्तिका लागि आइतबारदेखि आकाशदीप दान पनि सुरु हुन्छ।
आकाशदीप दान पाएसम्म बाँस, नपाएमा पलाँस, खएर, पीपल, आदिको लिङ्गो ठड्याइन्छ। आकाशदीप दान भगवान् विष्णुलाई समर्पण गरी बाल्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कात्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कात्तिक स्नान गरी घरघरमा विशेषरूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि आजदेखि नै शुरु हुन्छ। तुलसी पूजा सूर्योदयअघि नै गरिसक्नुपर्ने मान्यता छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कात्तिक स्नान गरे महापातकबाट पनि मुक्त भइने धार्मिक विश्वास छ। कात्तिक स्नान गर्नेले आजदेखि कात्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म दुई दल भएका मास, मुगी, मुसुरो, चना, भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ।
Previous राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई देशकै चर्चित नेवारी परिकारको स्वाद !
Next जुम्लामा पाक्यो मार्सी धान, भित्र्याउन किसानलाई चटारो!